Ama-Disney Castles angama-8 Ongavakashela Empilweni Yangempela - Ukuhamba
Ama-Disney Castles Ongavakasha Empilweni Yangempela
8 Disney Castles You Can Actually Visit Real Life
Khohlwa ngezilwane zePrince Charming nezikhulumayo — sonke simayelana nalezo zigodlo zeDisney (Kulungile, kanye nezilwane ezikhulumayo). Ngenkathi izindaba ngokwazo zingaba izinganekwane, kuvela ukuthi ezinye zezinqaba ezivelele kakhulu zebhayisikobho zakhuthazwa yizakhiwo zempilo yangempela. Phinda imicabango yakho yobuntwana ngalezi zinqaba eziyisishiyagalombili zemilingo zeDisney ongangena kuzo (ukudansa nokucula, ngokuzithandela).
OKUSHIWO: Izinqaba ezi-6 eMelika Lapho Ungathola Ukulungiswa Kwakho Kwezinganekwane
pedrosala / Getty Izithombe
'IQHWA ELIMHLOPHE': I-ALCAZAR Castle, eSpain
Isigodlo sendlovukazi embi kwifilimu yesici sokuqala sopopayi seDisney kuthiwa sisekelwe kule nqaba ehlaba umxhwele yaseSegovia emise okomnsalo womkhumbi. Eyakhelwe ekuqaleni kwekhulu le-12, lesi sakhiwo esitelekele kube yisigodlo sasebukhosini, ijele, ikolishi, isikole samasosha manje esiyigcinamagugu. (Kepha siyithanda kakhulu indima yayo ku-Disney classic.)
Disney / Herby64 / Getty Izithombe
'Kudidekile': IMont Saint-Michel, eFrance
Ngokususelwa endabeni kaRapunzel, lokhu kugqwayiza kwesimanje kwenzeka eMbusweni waseCorona, izwe elijabulisayo eliphefumulelwe impilo yangempela IMont Saint Michel eNormandy. Njengenye yezindawo ezihamba phambili kakhulu zokuhambela e-Europe, lesi siqhingi manje siyindawo eshisayo yezokuvakasha ye-abbey yakhona endala, imigwaqo emisha nokubukwa okumangazayo. O, futhi kanjani lokhu ngomlingo? IMont Saint-Michel Bay inamagagasi aphakeme kakhulu eYurophu, aguqula lesi siqhingi kabili ngosuku.
Disney / Arterra / Getty Izithombe
'Ubuhle nobubi': Chateau du Chambord, eFrance
Abalandeli balesi sigaba se-Disney (kanye nohlobo lwakamuva lwe-Emma Watson) bangavakashela ugqozi lwangempela lwenqaba yesilo saseLoir-et-Cher, eFrance. Omunye wabenzi befilimu, uGlen Keane, uvakashele ichâteau ukuyokwenza ucwaningo futhi wazi ngaso leso sikhathi ukuthi indawo esabekayo, ehlaba umxhwele nazo zonke lezi zinhlayiya kulapho kwakuhlala khona iSilo. (Amawashi okukhuluma nezinti zezibani akufakiwe.)
Disney / emicristea / Getty Izithombe
'I-Mermaid Encane': IChillon Castle, eSwitzerland
Ingabe lokhu IChibi iGeneva château ubukeka ujwayelekile? Kukhuthaze isigodlo sikaPrince Eric. Abahambi bangavakashela i-château bebodwa noma ngomhlahlandlela, futhi kungenzeka nokuthi baqashe lesi sakhiwo ngemicimbi yangasese. Bekungaba ngumlingo onjani ukushada esigodlweni sangempela seDisney?
Disney / Glace Ihhotela
'Kufriziwe': Ihhotela de Glace, eCanada
Isigodlo seqhwa esikhazimulayo sika-Elsa sakhuthazwa ihhotela eQuebec , lapho izivakashi zingahlala khona enqabeni yangempela yeqhwa neqhwa. Umqondisi we-movie uChris Buck wavakashela ehhotela eminyakeni emihlanu ngaphambi kokuba ifilimu ikhishwe ukuyokwenza ucwaningo oluthile, ngakho-ke uyazi ukuthi kufanelekile ukuvakashelwa. Vele uzame ukungakhiphi ukuhumusha kwakho kwe-Let It Go futhi ngokuzwakalayo.
Disney / Somchaisom / Getty Izithombe
'I-Aladdin': Taj Mahal, eNdiya
Imabula emhlophe, izingadi ezivundile, lezo zindwangu eziwubukhazikhazi-kulula ukubona ukuthi isigodlo sakwaSultan sakhuthazwa kanjani ngumaka odume kakhulu waseNdiya. Lesi sikhangiso se-Agra futhi Indawo ye-UNESCO Heritage ingabukeka njengesigodlo, kodwa empeleni iyidina elithunyelwe yi-Emperor Shah Jahan ngo-1632 ngomkakhe othandekayo, uMumtaz Mahal.
Disney / bluejayphoto / Getty Izithombe
'Cinderella': INeuschwanstein Castle, eJalimane
Ngokunokwenzeka isigodlo seDisney esidume kunazo zonke, ikhaya lePrince Charming lalikhuthazwe iBavaria UNeuschwanstein . Le nqaba yezinganekwane iphinde yagqugquzela indawo yokuhlala i-Sleeping Beauty (kanye nokuheha kwepaki yetimu yeDisney). Izivakashi zingavakashela lesi sigodlo zifunde ngoMad King Ludwig II waseBavaria, owakha ngo-1892 njengendawo yokubalekela umqambi wakhe amthandayo, uRichard Wagner.
Disney / jgshields / Getty Izithombe
'Unesibindi': IDunnottar Castle, eScotland
Akumangazi ukuthi le ntandokazi yomndeni ngenkosazana yaseScotland ehlubukayo ithola ugqozi lwayo ezweni lomhlaba. Isigodlo somndeni wakwaDunBroch sasisekelwe Dunnottar , isakhiwo samatshe esihehayo esigxile emlandweni futhi sihlala ngokuphawulekayo eweni ngasolwandle.
OKUSHIWO: Izindlela eziyi-12 zeGenius zokonga imali kwaDisney
ukwelapha kanjani ukuwa kwezinwele
susa i-nail polish ngaphandle kwesisusa
ikhambi lemvelo lokwelapha impandla
izindaba zothando hollywood movie list
U-adam sandler udwebe ama-barrymore movie